Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Haiti » Dhulgariirkii Haiti oo ay ku dhinteen in ka badan 1400
Caribbean • Wararka Haiti • Caafimaadka Warka • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Tirada dhimashada dhulgariirka Haiti - xushmada sawirka @aliceexz - twitter
Dhismayaasha burburay ma aha wax ka badan burburka, carruurtu waxay ka soocan yihiin waalidkood, iyo Duufaanta Tropical Grace ayaa laga yaabaa inay keento roob culus oo isu beddelaya daadad iyo dhul -gariir ka dib markii dhulgariirkii weynaa ee 7.2 uu ku dhuftay Haiti Sabtidii, Ogosto 14, 2021. Maanta, tirada dhimashada ayaa gaartay 1,419 .
In ka badan 7,000 oo guri ayaa la simay, waxaana jira ugu yaraan 6,900 oo qof oo dhaawacmay.
Ra'iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo hal bil ah.
Dhulgariirka dushiisa, Haiti waxay la tacaalaysaa rabshadaha baandooyinka socda iyo dilkii dhawaan loo geystay madaxweynaheeda Jovenel Moise oo gurigiisa lagu toogtay bil ka hor.
Dhulgariirka ayaa ka dhacay dhinaca koonfur galbeed ee dalka iyadoo magaalooyinka qaar gebi ahaanba la burburiyey kumanaanna ay hoy la’aan noqdeen. In ka badan 7,000 oo guri ayaa la simay, waxaana jira ugu yaraan 6,900 oo qof oo dhaawac ah, kuwaas oo badankoodu sugaya in isbitaal la dhigo. Qaar badan oo ka mid ah dhaawacyada ayaa wajahaya suurtogalnimada in cudurku ku dhaco in ay ku dhegaan canaasiir la'aan daryeel caafimaad.
Lahaanshaha sawirka obama.org
Magaalada Les Cayes ee ku taal xeebta ayaa aad u xumayd ku waxyeeloobay dhulgariirkii iyada oo qoysas badani ku dheggan yihiin waxa ay ka samatabixin karaan marka ay habeenka banaanka u baxaan.
Xaalad degdeg ah oo hal bil ah ayaa waxaa ku dhawaaqay ra’iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry. Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu ku baaqay "isku duubnaan qaabeysan" isagoo xusuusanaya jahawareerka ballaaran ee dadaallada gargaarka ka dib dhulgariirkii dhacay 11 sano ka hor.
Gargaarka waxaa lagu hagaajiyaa meelahaas aadka ugu baahan iyo isbitaallada oo awoodiisu ka baxsan tahay. Diyaaradaha samatabbixintu waxay sida ugu badan ee suurtogalka ah u soo qaadaan gargaar diyaaradeed oo ka socda dhowr magaalo oo dalka ah.
Samantha Power ayaa loo magacaabay magaca USAID Maamulaha Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden si uu u kormeero kaalmada Mareykanka ee Haiti. Hawlgal goobid iyo samatabbixin oo ka kooban 65 xubnood ayaa laga soo dirayaa Virginia. Ilaalada Xeebaha Mareykanka ayaa daabulaya dadka dhaawacmay oo ay la socdaan shaqaale caafimaad oo ay la socdaan maraakiib iyo diyaarado. Boorsada Samaritan, oo ah koox gargaar oo fadhigeedu yahay North Carolina, ayaa diraya 13 khabiir oo ka jawaabaya musiibada iyo 31 tan oo sahay degdeg ah.
Barnaamijka Cunnada Adduunka ee Qaramada Midoobay wuxuu ka shaqeynayaa inuu u diro gawaarida xamuulka ee sahayda cuntada Talaadada.
Dhaqdhaqaaqa kooxaha gaangiska ah ayaa sii adkeynaya dadaallada gargaarka, gaar ahaan Martissant, oo ah degmo xeebeed ku taal galbeedka caasimadda. Saraakiishu waxay ku khasbanaadeen inay wada xaajood la yeeshaan kooxaha burcadda ah oo oggolaaday inay oggolaadaan 2 kolonyo bini'aadannimo ah maalintii.
Marka laga soo tago rabshadaha baandooyinka ee socda, Haiti waxay la tacaalaysaa dilkii dhawaan loo geystay madaxweynaheedii Jovenel Moise kaas oo lagu dilay gurigiisa wax ka yar bil ka hor isaga oo qaranka uga tagay fowdo siyaasadeed. Si taas loo dhammaystiro, dabcan waxaa jira caqabadaha faafa ee COVID-19.
Sida laga soo xigtay Sahanka Juqraafiga ee Maraykanka (USGS), dhulgariir cabbirkiisu yahay 5.2 ayaa la dareemay dhulgariirkii ka dib, waxaana ku xigay 9 dhulgariir oo ka sii daran oo la filayo maalmaha soo socda.
Madaxweynaha Guyana Irfaan Cali
Dhambaalka rajada Guyana
Xisbiga Horumarinta Dadweynaha Civic/Guyana ayaa maanta ku shaaciyay bartiisa twitter -ka in Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Guyana uu ku dhawaaqay in la sameeyay koonto bangi si loogu helo deeqo loogu talagalay dadaallada gurmadka dhulgariirka ee Haiti. Warsaxaafadeedka ayaa qeyb ahaan u qornaa:
“Iyada oo la ilaalinayo ballanqaadkii dowladda ee ahaa in la qaado tallaabo deg deg ah oo xoog leh si wax looga qabto dhulgariirkii ba’naa ee dhowaan ku dhuftay gobolka walaasheen ee CARICOM ee Jamhuuriyadda Haiti, iyadoo la raacayo wada hadal toos ah oo khadka taleefanka ah Sabtidii la soo dhaafay oo dhex maray Madaxweyne Mudane Irfaan Ali iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Haiti, mudane Dr. Ariel Henry, Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa maanta akoon bani'aadamnimo ka hirgeliyey Republic Bank (Guyana) Limited, magaca Guddiga Difaaca Rayidka.
“OPM waxay si dhow ula shaqayn doontaa bulshadayada rayidka ah, waaxda gaarka loo leeyahay, iyo la -hawlgalayaasheeda kale si dhaqso loogu ururiyo lacag loogu talagalay isku -duwaha, wax -ka -qabashada gargaarka muhiimka ah ee dadka ay saameeyeen Haiti.
“Go'aanka Guyana ee ah in si wadajir ah loogu istaago waqtiyada wanaagsan iyo kuwa xunba walaalaheena CARICOM ee ku nool gobolka oo dhan weli waa mid taagan. Sidii aan hore u yeelnay, waxaan isku dari doonnaa tamar iyo kheyraad si aan ula kulanno caqabadaha bani'aadamnimo ee ugu dambeeyay si aan ugu soo dejinno raaxo iyo gargaar walaalaha Hatian sida ugu dhaqsaha badan.
"Waxaan ka codsanaynaa dadka reer Guyana ee qurbaha ku nool inay ku soo biiraan dadaalladeenna si aan u siino gargaar la taaban karo iyada oo loo marayo ama jawaab wadareed."